Wholesale T&G Cedar Boards / Cedar cladding Mpanamboatra sy mpamatsy | Hanbo
Anaran'ny vokatra T&G Cedar Boards / Cedar cladding
hateviny 8mm / 10mm /12mm / 13mm / 15mm / 18mm / 20mm na hateviny kokoa
kilasy Manana fatotra sedera na sedera mazava
Ampiasaina betsaka ho fitaovana tafo, rindrina ivelany, varavarankely sy varavarana, haingon-trano anatiny, akoran-trano, lalambe maitso, hazo fisaka ary trano hazo efa vita mialoha.
Ny Western Red Cedar T&G Boards dia misy amina karazana sy firafitra isan-karazany mba hamenoana ny fomba noeritreretinao azy. Ny takelaka mazava dia manana toetra voajanahary voafetra ary voafaritra rehefa "madio", endrika tsara kalitao avo indrindra no tadiavina.
Ny fiteny Red Western Cedar Tongue & Groove dia be mpampiasa amin'ny endriny tsara sy mahavariana. Izy io dia azo apetraka mitsivalana, mitsangana na diagonaly, ny fomba tsirairay manome endrika hafa miavaka. Ny lela sy ny hazo sedera dia miatrika endrika mazava tsara.
Ny tabilao sedera dia mety indrindra amin'ny tetik'asa fanaovana akanjo an-trano rehetra, varotra ary ambany ambany noho ny fikojakojana ambany sy ny fitafiana mafy amin'ny hazo. Ireo tabilao dia azo lotoina mba hampitomboana ny faharetana.
Afaka mamokatra piraofilina hazo sedera manokana izahay.
Alefaso amin-dry zareo sary na sary tapaka ny mombamomba anao izay tianao hampifanarahana aminay ary mamoaka sary CAD izay hikosohanay mpanapaka vaovao.
Hesorina amin'ny vatan-kazo maro loha ny hazo ataonay.
Ny fanapahana hazo fijaliana, ny fanapahana lalina, ny fandefasana spindle dia azo tanterahina avokoa.
Teo aloha: Fitaovana Cedar Interior
Manaraka: T&G Cedar Boards
Cedar Shingles maitso maitso
4-6 Olona Hemlock Infrared Sauna
Shingles Cedar Green Green
Shingles Cedar maintso mamiratra